बाँझै रहने जमिनमा चियाखेति
मनोज भट्टराई , ओखलढुंगा , ५ साउन / ओखलढुंगाको पस्चिमी गाविस रंगनीमा चियाखेति सुरु भएको छ ।विगत केही वर्ष अगाडि रामेछापको बाम्तिभण्डारमा सुरु गरिएको चिया खेतीबाट प्रभावित भएर यहाँका कृषकहरुले बाँझै रहने जमिनमा चियाखेति सुरु गरेका हुन । २ वर्षअघि रामेछापको बाम्तिभण्डारबाट १६ हजार २०० बिरुवा ल्याई सुरु गरिएको चिया खेतीबिकासका लागि २०७१ मा […]
डा.केसीले अनसन स्थगित नगरे निजी मेडिकल कलेजहरु बन्द गर्ने डा. रिजालको चेतावनी
काठमाडां, ४ साउन । आठपटक अनसन बसेका चिकितसक डा गोविद केसीले शिक्षण अस्पताल भित्रको अनसन स्थगित नगरे क्रमिक रुपमा एकेडेमिक सेक्सन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी डा भोला रिजालले दिएका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. रिजालले गोविन्द केसीको अनसन अबको एक दिन मात्र आफुहरुले खप्न सक्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘यसरी अनसन बसेर […]
यसरी सार्बजनिक भयो एउटा दम्पतिकोे गोप्य सेक्स भिडियो
काठमाडौं, ४ साउन । राजधानीकै एक दम्पती । बिहे भएको लामै समय बितिसकेको थियो । एक दिन पतिले पत्नीलाई आफ्ना गोप्य क्रियाकलाप क्यामेरामा कैद गर्ने प्रस्ताव गर्छन् । पत्नी सुरुमा त आनाकानी गर्छिन् ।तर, पतिले आफ्ना गोप्य क्षण अविस्मरणीय बनाउने भन्दै कुनै जोखिम नरहेको आश्वस्त पारेपछि उनी तयार भइन् । त्यो भिडियो आफूसँग सुरक्षित रहेकोमा […]
टहरा मुनी रुझ्दै पढ्दा बालबालिकाको विजोग
शशिधर भण्डारी प्यूठान, ३ साउन / भुकम्पले ध्वस्त बनाएको प्यूठानको एक विद्यालयमा भवनको अभावका कारण टहरामा बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । सदरमुकाम नजिकै पर्ने माझकोट गाविसको धर्मावति माध्यमिकमा सरोकारवालाहरुको ध्यान जान नसक्दा विद्यार्थीहरुले चर्को घाम र वर्षातको झरीलाई सामना गर्दै पढ्न बाध्य हुनु परेको हो । जिल्लाका जुम्रीकाँढा, फोप्ली, विजुवार र धर्मावतिका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्दै […]
मोरङमा एक दर्जन सहकारीको दर्ता खारेज
मोरङ, ३ साउन । सहकारी डिभिजन कार्यालय मोरङले एक दर्जन निस्क्रिय सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालय मोरङका प्रमुख गोपीप्रसाद घिमिरेका अनुसार आव २०७२-०७३ को अन्त्यमा १२ वटा सहकारीको दर्ता खारेज गरिएको हो । सहकारी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएर कारोबार नगरेका र समयमा साधारणसभा गरी सहकारी कार्यालयमा प्रतिवेदन नबुझाएका सहकारी खारेजमा […]
चट्याङले अवरुद्ध विद्युत् सेवा सुचारु भएन
बैतडी, ३१ असार । बैतडीको रौलेश्वरमा चट्याङले अवरुद्ध भएको विद्युत् सेवा १५ दिनभन्दा बढी भइसक्दा समेत सुचारु नहुँदा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन् । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको १५ दिनभन्दा बढी भएपनि विद्युत् सेवा सुचारु गर्नका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा धेरै समस्या खेप्नुपरेको स्थानीय नरेन्द्र विष्टले […]
प्रतिष्ठानबाट चारस्रष्टा पुरस्कृत
मोरङ, ३० असार । प्रतिभा पुरस्कार प्रतिष्ठान विराटनगरले हरेक दुई वर्षमा प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार बुधबार विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा चारजना स्रष्टालाई समर्पण गरेको छ । भानु जयन्तीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा रु ५० हजार राशिको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार विप्लव ढकाल र रत्नमणि नेपाललाई संयुक्तरुपमा प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, रु १५ हजार राशिको […]
आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाई ठगी गर्ने छन्त्याल कर्यापच्याप
काठमाडौँ, २८ असार वेरोजगार युवाहरूलाई आकर्षक तलवको प्रलोभन देखाई दक्षिण अफ्रिका, इराक, मकाउ र पलाउ पठाउने भनी ठगी गर्ने वाग्लुङ्ग देवीस्थान–६ घर भई दाङ्ग तुलसीपुर–५ बस्ने ३५ बर्षीय होम बहादुर छन्त्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । छन्त्यालले युवाहरुबाट लाखौ रुपैयाँ उठाई रहेको सूचना महानगरीय अपराध महाशाखामा प्राप्त भएपछि खटिएको प्रहरी टोलीले छन्त्याललाई खोजी कार्य जारी […]
यी हुन् आमालाई ओडारमा लिएर छाड्ने छोराबुहारी
काठमाडौं, २९ असार । छोराबुहारीले घरबाट जंगलमा लगेर छाडिदिएपछि दुई महिनादेखि ओडारमा बस्दै आएकी सुर्खेत, सालकोट–४ की ७२ वर्षीय बाटु अधिकारीको उद्धार गरिएको छ । ‘आमाले फोहोर गरेको भन्दै पत्नीले दिनहुँ किचकिच गर्न थालेपछि ओडारमा लगेर छाडेको थिएँ,’ कान्छा छोरा चन्द्रबहादुरले भने । वैशाखको अन्तिम सातातिर बृद्धा बाटुलाई छोराबुहारीले जंगलमा छाडेका थिए । सालकोट गाविसका […]
उत्कृष्ट वन समूह र प्राविधिक पुरस्कृत
म्याग्दी, २८ असार । जिल्ला वन कार्यालयले सोमबार म्याग्दीका उत्कृष्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन प्राविधिकलाई पुरस्कृत गरेको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण, संवद्र्धनमा योगदान गर्ने एक जना वन प्राविधिक र तीनवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पुरस्कृत गरिएको हो । यस वर्ष घतान इलाका वन कार्यालयमा कार्यरत वनरक्षक टेकनाथ शर्मालाई उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा […]